जीवन साँचो साथीहरु संग राम्रो छ। - बेनामी - उद्धरण प्याडिया
जीवन साँचो साथीहरु संग राम्रो छ, र यो सत्य हो! यद्यपि हामी वरपर धेरै व्यक्तिहरू छन्, यति धेरै व्यक्तिहरू छन् जो वास्तवमा हामीलाई सही अर्थमा मूल्य दिन्छन्। यो बुझ्न आवश्यक छ कि सबैले तपाईं जस्तो गरी तपाईंलाई स्वीकार गर्दैनन्।
जीवन राम्रो हुन्छ जब तपाईं वरिपरि तपाईंको वास्तविक मित्रहरू हुन्छन्, तिनीहरू जसले तपाईंलाई सबै बाधाहरूमा तपाईंको छेउमा बस्ने प्रतिज्ञा गर्छन्, र तिनीहरूले जीवनमा बाधा पार गर्ने बाधाहरूको बाबजुद उनीहरू वास्तवमै यो गर्छन्।
जीवनको मार्ग सहज छैन, यो उतार-चढावहरूले भरिएको छ, तर जब तपाईंसँग केही राम्रो व्यक्तिहरू छन् भने, ती कारणहरू हुन् जुन तपाईंलाई लाग्छ मानौं कि चीजहरू तपाईंको पक्षमा फर्किरहेका छन्।
कहिल्यै पनि आफ्ना साँचो साथीहरूलाई वेवास्ता नगर्नुहोस्, र निश्चित गर्नुहोस् कि तिनीहरू सँधै तपाईंहरूसँगै छन्, किनकि तिनीहरूले तपाईंलाई कमजोर महसुस गर्दा बल दिन्छन्। जब हामी आफैंमा विश्वासको कमी हुन्छौं तब साँचो मित्रहरूले हामीलाई उत्प्रेरणा दिन्छन्।
तिनीहरू ती कारणहरू हुन् जुन हामी ऊर्जा र सकरात्मकताका साथ फेरि फेला पर्दछ। जीवन पक्कै राम्रो छ, र यदि छैन भने, हामी आफैंसँग त्यस्तो महान व्यक्तिहरू हुँदा हामी अझ राम्रो भएको देखिन्छ।
जब तपाईं साँचो मित्रहरूद्वारा वरपर हुन्छन्, तपाईंलाई थाँहा छ कि कम से कम दिनको अन्तमा तपाईंको फिर्ता हुनेछ। साँचो मित्रहरू ती छैनन् जो तपाईंलाई आर्थिक सहयोग गर्छन्, तर तिनीहरू ती हुन् जो आँधीबेहरीको सबैभन्दा कठिन तपाईंले बडी उठाउँदा पनि तपाईंको साथमा हुनुहुन्छ।
तिनीहरू ती व्यक्ति हुन् जसले तपाईंलाई को हुन् भनेर माया गर्छन् र तपाईंलाई प्रत्येक दिन राम्रो गर्न प्रेरित गर्छन्। तिनीहरू ती हुन् जसले तपाईंमाथि विश्वास गर्छन् जब सारा संसार तपाईंको विरूद्ध जान्छ।
यी व्यक्तिहरू साथी हुन् जसका लागि तपाईं लगभग केहि पनि गर्न सक्नुहुन्छ र केही पनि, वा अरू केहि पनि हेरविचार बिना नै। जीवन राम्रो हुन्छ जब तपाईंसँग यस्ता आश्चर्यजनक व्यक्तिहरू हुन्छन्।
तपाईंलाई थाहा छ यी व्यक्तिहरू तपाईंको साथमा खडा हुनेछन् मात्र जब तपाईं खुशी हुनुहुन्छ र तपाईंको सफलताको शिखरमा हुनुहुन्न, तर तिनीहरू तपाईंलाई त्यहाँ सघाउने छन् जब तपाईं संकटसँग सामना गर्दै हुनुहुन्छ।
जीवन राम्रो हुन्छ जब तपाईंलाई थाहा छ कि यी सुन्दर आत्माहरु छन् तपाईलाई मार्गदर्शन गर्न.
प्यारा मित्रता उद्धरण
राम्रो उद्धरण महसुस गर्नुहोस्
हार्ड टाइम्सले साँचो मित्रहरूको भनाइ प्रकट गर्छ
मित्र उद्धरणको साथ यात्रा
तपाईंलाई मुस्कुराउन र अझ राम्रो बनाउनको लागि उद्धरणहरू
मिठो मित्रता उद्धरण
साँचो मित्रहरूको उद्धरण
साँचो मित्र भनाइ
साँचो मित्रता उद्धरण
साँचो प्रेरणा उद्धरण
म Tuesday्गलबार प्रेरणा
बुद्धिमता मैत्री उद्धरण
ती सबैको लागि अहिले कठिन समय पाइरहेको छ, सम्झनुहोस् - यो केवल अस्थायी हो। - बेनामी
ती सबैको लागि अहिले कठिन समय पाइरहेको छ, सम्झनुहोस् - यो केवल अस्थायी हो। - बेनामी सम्बन्धित ...
यसलाई जान दिनुहोस्। जीवनको सबैभन्दा खुशीको क्षणहरू मध्ये एक हो जब तपाईले साहस पाउनु हुन्छ तपाईले परिवर्तन गर्न नसक्ने कुरालाई छोडिदिनुहोस्। - बेनामी
यसलाई जान दिनुहोस्। जीवनको सबैभन्दा खुशीको क्षणहरू मध्ये एक हो जब तपाईले हिम्मत पाउनुभयो…
तपाईंको मूल्य कसैको अक्षमताको आधारमा तपाईंको मूल्य कम हुँदैन। - बेनामी
यो नोट गर्नु पर्दछ कि केही खास विधिका आधारमा कसैलाई पनि न्याय गर्न सकिदैन ...
मानिसहरूलाई मेरो जीवनबाट काट्नुको मतलब यो होइन कि म तिनीहरूलाई घृणा गर्दछु। यसको मतलव म आफैंलाई सम्मान गर्छु। - बेनामी
जब तपाईंलाई लाग्छ कि तपाईंको अनादर भइरहेको छ वा अन्य व्यक्तिले तपाईंलाई पर्याप्त मूल्य दिइरहेका छैनन् कि तपाईंसँग…